Galaxy Note9ကို တစ်စစီဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါ အထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 6606 Views
Galaxy Note9ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Note 8 နဲ့ သိပ်မကွာသလိုလိုထင်ရပေမယ့် အနောက်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့ Fingerprint နေရာတွေဒီဇိုင်းတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက် Note9မှန်းတော့ သိသာပါလိမ့်မယ်။ Feature အသစ်တွေ Specs အသစ်တွေပါလာတာတော့ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရော အများကြီးပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုတာ သိပါသလား?? ဒါတွေအားလုံးက Hi-tech Mail.Ru က TearDown လုပ်ထားတာပါ။
Fingerprint Sensor ကို ဘေးမှာထားရာကနေ dual-camera ရဲ့အောက်မှာထားလိုက်တာအပြင် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းထားသိုပုံလေးက Note 8 နဲ့ နည်းနည်းလေးမတူဘဲပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ ပိုကြီးတဲ့ 4000mAh ဘက်ထရီကိုဆံ့အောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပါလိမ့်?? ရှင်းပါတယ်။ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို ပိုသေးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် နေရာယူတာပိုနည်းသွားတဲ့အပြင် ပြင်ဆင်အစားထိုးရတာလည်း ပိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။
သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ Charging component ပါ။ အစိတ်အပိုင်းတွေက တော်တော်လေးသေးသွားပြီး Logic board ကနေ ခွာထုတ်ရတာလည်း ပိုလွယ်သွားပါတယ်။ ဈေးလည်းပိုသက်သာမယ်လို့မှန်းရတာပါပဲ။ Connector တွေကိုလည်း မပျက်စီးလွယ်အောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းထားပါတယ်။
Hi-Tech က အဓိကပြထားတဲ့အတိုင်းဆို အဓိကအသိသာဆုံးပြောင်းလဲသွားတာက သူ့ရဲ့ အအေးစနစ် Cooling System ပါ။ အခုခေတ်စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများက အပူထုတ်ဖို့အတွက် ကြေးနီပြွှန်တွေကိုသုံးကြပေမယ့် Galaxy Note9မှာတော့(အောက်မှာပြထားသလို) ကြေးနီပြားခပ်ကြီးကြီးကိုသုံးထားပါတယ်။ သဘောတရားအရတော့ ဒီလိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက် Processor ကိုအပူမလွန်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဖုန်းကိုမပူစေဘူးလို့ပါ။ ဒါကတော့ သုံးကြည့်ပြီးရင် တကယ်ပူမပူသိရမှာပါပဲ။
Galaxy Note9ရဲ့အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်လေးပြောင်းလဲထားပြီး ပြင်ဆင်ရပိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားသလိုပါပဲ။ နောက်ထပ် iFixit ရဲ့ Tears Down ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲသိရဦးမှာပါ။
Galaxy Note9ကိုရုတျတရကျကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ Note 8 နဲ့ သိပျမကှာသလိုလိုထငျရပမေယျ့ အနောကျကကွညျ့လိုကျရငျတော့ Fingerprint နရောတှဒေီဇိုငျးတှပွေောငျးသှားတဲ့အတှကျ Note9မှနျးတော့ သိသာပါလိမျ့မယျ။ Feature အသဈတှေ Specs အသဈတှပေါလာတာတော့ လူတိုငျးသိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့အတှငျးပိုငျးမှာရော အမြားကွီးပွောငျးလဲထားတယျဆိုတာ သိပါသလား?? ဒါတှအေားလုံးက Hi-tech Mail.Ru က Tears Down လုပျထားတာပါ။
Fingerprint Sensor ကို ဘေးမှာထားရာကနေ dual-camera ရဲ့အောကျမှာထားလိုကျတာအပွငျ အတှငျးပိုငျးအစိတျအပိုငျးထားသိုပုံလေးက Note 8 နဲ့ နညျးနညျးလေးမတူဘဲပွောငျးလဲသှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Samsung အနနေဲ့ ဒီနှဈမှာ ပိုကွီးတဲ့ 4000mAh ဘကျထရီကိုဆံ့အောငျ ဘယျလိုစီစဉျထားပါလိမျ့?? ရှငျးပါတယျ။ ပစ်စညျးအစိတျအပိုငျးလေးတှကေို ပိုသေးအောငျလုပျလိုကျတဲ့အတှကျ နရောယူတာပိုနညျးသှားတဲ့အပွငျ ပွငျဆငျအစားထိုးရတာလညျး ပိုလှယျကူသှားပါတယျ။
သိသိသာသာပွောငျးလဲသှားတာတဈခုရှိပါသေးတယျ။ Charging component ပါ။ အစိတျအပိုငျးတှကေ တျောတျောလေးသေးသှားပွီး Logic board ကနေ ခှာထုတျရတာလညျး ပိုလှယျသှားပါတယျ။ ဈေးလညျးပိုသကျသာမယျလို့မှနျးရတာပါပဲ။ Connector တှကေိုလညျး မပကျြစီးလှယျအောငျနညျးနညျးလေးပွောငျးထားပါတယျ။
Hi-Tech က အဓိကပွထားတဲ့အတိုငျးဆို အဓိကအသိသာဆုံးပွောငျးလဲသှားတာက သူ့ရဲ့ အအေးစနဈ Cooling System ပါ။ အခုခတျေစမတျဖုနျးတျောတျောမြားမြားက အပူထုတျဖို့အတှကျ ကွေးနီပွှနျတှကေိုသုံးကွပမေယျ့ Galaxy Note9မှာတော့(အောကျမှာပွထားသလို) ကွေးနီပွားခပျကွီးကွီးကိုသုံးထားပါတယျ။ သဘောတရားအရတော့ ဒီလိုသုံးလိုကျတဲ့အတှကျ Processor ကိုအပူမလှနျအောငျကာကှယျပေးနိုငျပွီး ဖုနျးကိုမပူစဘေူးလို့ပါ။ ဒါကတော့ သုံးကွညျ့ပွီးရငျ တကယျပူမပူသိရမှာပါပဲ။
Galaxy Note9ရဲ့အတှငျးပိုငျးတညျဆောကျပုံတှကေိုကွညျ့လိုကျရငျ တျောတျောလေးပွောငျးလဲထားပွီး ပွငျဆငျရပိုလှယျကူအောငျလုပျပေးထားသလိုပါပဲ။ နောကျထပျ iFixit ရဲ့ TearDown ကိုစောငျ့ကွညျ့လိုကျရငျ သူတို့ဘယျလိုသုံးသပျသလဲသိရဦးမှာပါ။
Samsung Galaxy Note 9TearDown
စက်တင်ဘာလမှာ Snapdragon 710 ပါတဲ့ Meizu 16X ကို မိတ်ဆက်မည်